HFE Hydrofluoroether maka mgbatị nke Electronic China Manufacturer
Nkọwa:Hydrofluoroether na-achọsi ike maka nhazi,Na-achọsi ike maka Electronic,HFE Na-achọsi ike maka Nkọwapụta Electronic
Home > Ngwaahịa > Hydrofluoroether Cleaning Agent > Ngwọta Nhicha Maka Nkọwapụta Electronic > HFE Hydrofluoroether maka mgbatị nke Electronic
HFE hydrofluoroether nwere ike gbasaa ma gbasasịa n'elu ihe ndị dị na ihe dị iche iche, ma nwee mmetụta dị mma na ncha, mgbochi, nkwụsị na nhicha. Ngwọta nhicha nke HFE nwere ihe dị mma na-esi esi esi nri, ọ pụkwara itinye ya n'ọrụ dịgasị iche iche na-ekpuchi ihe dị iche iche. Oxafluoropropyl methyl ether na-ejikarị ya mee ihe dị iche iche na nhicha nke ihe ndị kwesịrị ekwesị, dịka nhichapụ nke batrị, PCB, components eletriki, akụkụ nke ọma, nhicha nke ákwà ngebichi / lenses, semiconductor, LCD na diski ike wdg, a pụkwara iji ya mee ihe maka ịla n'iyi na ihicha, nchọpụta leak nke eletrọniki ma ọ bụ nyocha ikuku ikuku, na ihe mgbaze. ọ bụ ihe omume gburugburu ebe obibi, bụ nke na-enweghị ntụpọ ma bụrụ nke na-enweghị ntụpọ, ma nke na-adịghị mma na nke na-adịghị njọ, ma dịpụrụ adịpụ. Onye na-edozi mmiri hydrofluoroether bụ onye na-abaghị uru nke nnukwu dielectric mgbe nile, obere ala elu, obere viscosity, mfe volatility na-enweghị ihe fọdụrụ na ezi kwụsie ike.
Hydrofluoroether na-achọsi ike maka nhazi Na-achọsi ike maka Electronic HFE Na-achọsi ike maka Nkọwapụta Electronic